Imaaraadka oo shacabkii uu dalalkoodii bur-buriyay sumcad ka dhex raadinaya! | XORRIYA NEWS
Home Fikrado Imaaraadka oo shacabkii uu dalalkoodii bur-buriyay sumcad ka dhex raadinaya!
Imaaraadka oo shacabkii uu dalalkoodii bur-buriyay sumcad ka dhex raadinaya!
Barnaamij-ka caan baxay ee Qalby Etmaan kaas oo lagu baahiyay Youtube, Facebook, Instgram iyo qaar kamid ah TV-yada Imaaraat-ka yaa noqday Barnaamij xambaarsan farriin ka qaro weyn, waxa uu qabanayo oo ah tabarrucaad iyo samafal!
Waa barnaamij taba rucaad ah oo lagusoo bandhigo, iyadoo wax la guddoonsiinayo dadyow-ga tabaaleysan, kuwaas oo ku kala nool bariga dhexe iyo Afrikaba. Waxa la muujiyay iyadoo Siiriyaan, Yameniyiin iyo Ciraaqiyiin wax la guddoonsiinayo. Barnaamijka waxa xiisaha gaarka ah u yeelay ayaa ah, in qofka ay wax guddoonsiinayaan, iskugu daraan lacag iyo guri iyo waliba in ay carruurta wax barasho u geeyaan!
Ninka muuqalkan daadihinayaa waxa uu sidoo kale dadka qaar u sameyaa ballan qaad ah in noloshooda inta ka dhiman la ka faala qaaday iyaga iyo carrruurtooda! Sidee ayey hey’ad samafal oo tabarrucaad uun sameysaa u kafaali qaadi kartaa dad fara badan noloshooda qarash intaas la’egna ugu bixin kartaa?
Barnaamijka waxa soo gudbiya nin aan wejigiisa soo ban dhigin oo qarsoon, codkiisa waa uu beddelaa aragtida muuqaalkiisa horena (Wejiga) wa uu qariyaa! Magaciisa waxa uu ku sheegaa oo kaliya Gaith. Sidoo kale in uu Imaaraatka kasoo jeedana waa uu sii raaciyaa!
Barnaamijka Marka aad rabta in aad Youtube-ka iyo meelaha lamidka ah ee lagu faafiyay aad ka daawato, waxa ugu horreya ee aad isha ku dhufaneysaa waa magaca Imaaraat iyo waliba hey’adda bisha cas ee Imaaraatka, taas ayaana ka dhigtay in loo arko barnaamij ujeeddo gaar ah xambaarsan!
Mowduucan ayaa muuqda mid ay rabto dowladda imaaraatku in ay ku kasbato quluubta shacabkii masaakiinta ahaa ee ay qeyb ka aheyd in ay guryohooda ka bara-kacaan! Sidoo kale Xorriya.com ayaa rumeysan in uu barnaamijkani yahay suuqgeyn uu imaaraatku isku sameynayo isla markaana uu doonayo in uu ku qariyo khaladaadkiisa xadka beelay ee uu ka geystay dalal badan oo muslimiin ah.